Samsung Galaxy Note2Version 4.4.2 ROOT လုပ်နည်း [Root 4.4.2 on GT-N7100 (All builds)]
Saturday, April 11, 2015 ဝင်းကမ္ဘာကျော် 1 comment
အရင်ဆုံး CWM သွင်းရပါမယ်....
CWM အတွက် ဖိုင်ကို အောက်မှာယူပါ...
ရပြီဆိုရင် ဖိုင်ဖြည်ပြီး Odin3 . ကနေ PDA မှာထည့်ပြီး ဖုန်းကို Download Mode ၀င်ပါ ၀င်နည်းကတော့ အောက်ကပုံ အတိုင်းပါ...
Download Mode ၀င်ပြီးပြီဆိုရင်.. ကွန်ပျူ တာနဲ့ချိတ်ပြီး Odin က ဖုန်းကိုသိပြီဆိုရင် ( Start ) နှိပ်ပြီး ခဏ စောင့်လိုက်ပါ ခနနေ ( pass ) အစိမ်းရောင်လေးပြပြီဆိုရင် အိုကေ ပါပြီ...
Odin3 v3.07 နဲ့တင်တာပိုကောင်းပါတယ် အောက်မှာယူပါ..
CWM သွင်းပြီး လို့ အောင်မြင်ပါပြီ. ( ROOT ) ဖိုင်လေးကို အောက်မှာ ယူပါ
ဒေါင်းလို့ရလာတဲ့ Super SU Zip ဖိုင်လေးကို SD ကပ်ထဲကူးထည့်လိုက်ပါ..... ဖုန်းဘက်ထရီ ၆၆% လောက်အနည်းဆုံးရှိရပါမယ်.ဖုန်းကို USBdebugging 0n ထားရပါမယ်
အားလုံးအိုကေပြီဆိုရင် Power off ပြီး ဘက်ထရီခဏဖြုတ်ပါ.. ပြီးရင် .... Vol UP +Home + Power ခလုပ်ပြိုင်တူ နှိပ်ပြီး ၀င်ပါ ပထမတကြိမ် (SAMSUNG ) Logo ဒုတိယ...တတိယ... (၃) ကြိမ်တက်လာရင် လက်အားလုံး လွှတ်လိုက်ပါ.....Recovery Mode ထဲကိုရောက်ပါ..
ပြီ...အောက်က ပုံအတိုင်..အရင် ဆုံး factory Reset လုပ်ပေးပါ..။
အသံလျော့ခလုပ်ကို သုံးပြီး ( vol down ) - wipe data /factory reset / ကိုရွှေ့ပါ
ပြီးပြီဆိုရင် ( install zip for sdcard ) ကို သွားပါ ..ပြီးပြီစောရင်စောနက ဒေါင်းပြီး SD ကပ်ထဲ ကူးထည့်ထားတဲ့ ( SUper SU ZIP ) ဖိုင်လေးကို
Flash ...လုပ်ပေးလိုက်ပါ.....ပြီးရင် ဖုန်းကို ( Reboot Now ) နှိပ်ပေးလိုက်ပါ.ဖုန်းမှာ Super Su apk လေးရောက်နေပါပြီ....
ဒီအဆင့်မှာ Super SU အလုပ်မလုပ်ရင် ... Settings > ကနေApplication manager >> SuperSU ကို တစ်ချက်ကလစ်ပြီး (Fore stop ) + (Disable ) Show notifications ကိုအမှတ်ဖြုတ် ပြီး ( Clear Cache ) ကို နှိပ်ပေးလိုက် ပြီးရင်.... အောက်က ပုံအတိုင်း ( SuperSU-v1.99 ) Zip ဖိုင်ကိုဖြည်ပြီး အထဲက ( Super user apk ) လေးကို ဖုန်းမှာ install လုပ်ပေးလိုက်ရုံပါပဲ.
ပုံနှင့် တကွ သေချာရှင်းပြထားလို့ ...အဆင်ပြေကြလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်.... ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် တိုင်ပတ်ခဲ့ဖူးလို့ ကိုယ်တိုင်ကလိမိသမျှလေးကို ပြန်လည် မျှဝေခြင်းဖြစ်ပါတယ်.... အမှားပါရင်ခွင့်လွှတ်ပါ.. မြန်မာစာအတွက် လောလောဆည် (ဖောင့်စတိုလ် ) Fone Style မှာ (save ) လုပ်ပြီး သုံးလို့ရအောင် Zawgyi✌☺range.apkဖိုင်လေး ကို ပြန်တင်ပေးထားပါတယ် ...
Ref : http://amonetawlay.blogspot.com
ဒါကတော့ xda က မူရင်း ပို့စ်ပါ......
2. Philz recovery 6.26.6 (.tar.md5 required) from http://goo.im/devs/philz_touch/CWM_A...-n7100.tar.md5
3. Update SuperSu v2 from here http://download.chainfire.eu/450/Sup...erSU-v2.00.zip
Done.Your device is rooted now.
Posted in: Android နှင့် မြန်မာ Font
Posted by dawallay lay at 2:40:00 AM
SD Memory အလိုအလျောက် Full ဖြစ်နေတာကို ဖြေရှင်းနို...
CD/DVD ခွေပျက်တွေထဲက Data တွေ ပြန်ယူနည်းTuesday, D...
ทำ USB เป็นตัว Boot สำหรับติดตั้ง Windows
Samsung Galaxy Note2Version 4.4.2 ROOT လုပ်နည်း...
[รีวิว] Far Cry4(นายอาร์ม)
Computerမှာ Virus အကိုက်ခံထားရခြင်း ရှိမရှိ စစ်ဆေး...
Android ဖုန်းအားလုံးအတွက် Recovery Mode ၀င်နည်း Mo...
Internet Download Manager သုံးမရဖြစ်နေရင် ဖြေရှင်း...
ဝင်းကမ္ဘာကျော် : ကွန်ပျူတာ နှေးကွေးလာခြင်းပြဿနာများ...
ဝင်းကမ္ဘာကျော် : YouTube က Video တွေ IDM နဲ့ ဒေါင်...